elinks: Ny mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny terminal Linux | Avy amin'ny Linux
elinks: Ny mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny terminal Linux
Amin'izao andro farany izao, ny olan'ny fifandraisako dia nitombo tamin'ny fomba haingana, miantehitra amin'ny kaonty maimaimpoana avy ao amin'ny kaominina, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fetrany azo antoka. Nanery ahy hampiasa indray io famerana io mpizaha Internet ho an'ny terminal Linux, tokoa, izao dia manao ny fikarohako avy amin'ny console sy ny fampiasana aho elinks, izay heveriko ho tsara indrindra amin'ny karazany avy.
Ity fahatsapana ho terena hamakivaky ny terminal ity, izay fomba azo ampidirina amin'ny fampahalalana ho an'ny maro, dia nampatsiahy ahy ny fotoanako fony aho nianatra nanamboatra mpizara tsy nisy interface graphique ary izany no hany fomba tsy maintsy niarahanay ny fikarohana zavatra dia tamin'ny alàlan'ireny fitaovana tena tsara ireny.
1 Inona no atao hoe elink?
2 Endri-javatra Elinks
3 Ahoana ny fametrahana elinks?
3.1 Mametraha elink amin'ny Debian sy ny derivatives.
3.2 Mametaka elink amin'ny Red Hat sy ny derivatives.
3.3 Mametraha elink amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
4 Ahoana ny fampiasana elinks?
Inona no atao hoe elink?
elinks dia mandroso mpitety tranonkala ho an'ny terminal, loharano misokatra, nosoratan'i Mikulas Patocka ary mifototra amin'ny lahatsoratra ho an'ny rafitra miasa UNIX, misy fiasa (HTTP / FTP / ..), ary koa ny fanohanana ny zana-kazo sy ny latabatra.
Ity fitaovana ity dia azo ovaina be ary ny fampiasa ao aminy dia azo hitarina amin'ny alàlan'ny fampiharana voasoratra ao Lua, Perl, Ruby o fitaka. Teraka tamin'ny fikasana hanatsara ny teo alohany Links ary niampy tsikelikely ny fiasa samy hafa, izay anisany ny fampiasana ny kiheba hitety, ny fampidirana tsoratadidy ary ny mety hisintomana.
Fanohanana CSS y ECMAScript.
Voadika amin'ny fiteny maro.
Tantara, tsoratadidy, Kitendry hitsin-dàlana, motera fikarohana.
Azo ampanjarina amin'ny ankapobeny.
Fametrahana sy fampiasana mora.
Anisan'ireo fiasa maro hafa.
Ahoana ny fametrahana elinks?
Ny fametrahana Elinks dia mora ary eo amin'ny ankamaroan'ny repositories amin'ny fizarana malaza indrindra. Azonao atao ny miditra amin'ny loharano ofisialy miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Mametraha elink amin'ny Debian sy ny derivatives.
Mametaka elink amin'ny Red Hat sy ny derivatives.
Mametraha elink amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Ahoana ny fampiasana elinks?
Afaka manomboka elinks ianao
na, atombohy mivantana amin'ny tranonkala tadiavinao ilay browser.
Noho ireo toetra rehetra ireo, ny fikirakirany mora, ny tombony azo amin'ny fanitarana azy ireo arakaraka ny zavatra takiko, ny haavony avo lenta sy ny fametrahana azy mora foana no nahatonga ahy handinika elinks: «Mpijery tranonkala tsara indrindra ho an'ny terminal Linux".
Efa nampiasa an'ity tranonkala ity ve ianao? Ary ahoana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » elinks: Ny mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny terminal Linux
tenshalite dia hoy izy:
Ny mbola tsy hitako na i Debian na i Archlinux dia ny fomba ahafahana mizaha tabilao.
Valio amin'i tenshalito
Araka ny fanamarihan'i @federico dia izao no dingana:
ao anatin'ny Elinks, kitiho ny ESC ary mankanesa any amin'ny File menu safidy -> Sokafy ny takelaka vaovao, na tsindrio ny bokotra t, dia mangataka URL vaovao ho anao izy
Smint19 dia hoy izy:
Valiny amin'ny Smint19
Tena feno sy tsara ity lahatsoratra ity, Luigys. Mikasika ny fanontaniana napetrak'i @tenshalito, ao anatin'ny Elinks, tsindrio ny ESC ary mankanesa any amin'ny fisehon'ny safidy File -> Sokafy ny takelaka vaovao, na tsindrio ny bokotra t, dia mangataka URL vaovao anao izy. Toa an'i Luigys, mampiasa Links2 sy Elinks betsaka aho, ao ambadiky ny Proxy Squid miaraka amina fanamarinana.
Misaotra betsaka Federico, izany indrindra no valin'ny olan'ny tenifolita
ao amin'ny Archlinux dia ao amin'ny tobim-piarahamonina misy azy io. mampiasa pacman, fa tsy yaourt. 🙂
Miasa amin'ny tty ve izy io?
Ces912 dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, tena mahaliana.
Valiny amin'ny Ces912
Ahoana no ahafahako mamela ny https fa tsy manokatra pejy izy ireo
Valio i linuxito
Nikambana amin'ny Linux Foundation ho mpikambana Platinum i Microsoft